About — Trip LEE - OFISIALY SITE
Naorina To mirehareha misy ny mampita ny fahamarinana ara-baiboly mafy orina ho an'ny tanora, kolontsaina maro mpihaino in hanintona sy mahery vaika fomba. Notarihan'ny Trip Lee, ny mpanoratra, mpampianatra, ary ny hip-hop, Naorina To mirehareha mikatsaka ny hampitaovana sy handrisika ny hetsika dia an'i Kristy-mpanara-dia izay unashamed mba hirehareha eo amin'ny Tompo.
Trip Lee dia mpanoratra, mpampianatra, hip-hop, ary nieritreritra mpitarika. Ny mpitandrina in Atlanta, Nitory tsy tapaka izy, ary mampianatra ao amin'ny famelabelaran-kevitra sy ny zava-mitranga kristianina, ary efa nahatanteraka ny mozika ho an'ny mpihaino an'arivony manerana izao tontolo izao.
Ao amin'ny boky voalohany, The Good Life, Lee dia manondro ny fiainana be dia be ao amin'i Kristy ihany no misy - fiainana na inona na inona mihoatra noho izao tontolo izao dia afaka atolotra. Ny boky faharoa, Mitsangàna, antso ny tanora tsy mba hiandry ny manaraka an'Andriamanitra, fa mba hifoha ka ho velona ankehitriny.
Amin'ny maha-mpanakanto hip-hop, Lee ny hira efa nahazo fanakianana laza, raha tonga lehibe sy mitombo mpanatrika. Izy no nahazo ny loka hizaha kintana, ary maro no atolotry ny Dove Awards. Ny farany no nanaovan'ireo telo Albums amin'ny #1 eo amin'ny takela-by Gospel tabilao, ary ny vao haingana indrindra rakikira, Mitsangàna, nanaovan'ireo amin'ny #2 eo amin'ny takela-by Rap sary sy #16 ny takela-by 200.
Trip faniriana lalina indrindra ao amin'ny soratra, fampianarana, ary ny fanaovana dia ny hanambara ny famindram-po sy ny voninahitra 'i Jesoa Kristy.
Au livre Trip Lee hampianatra, mitoria, na manao amin'ny ny hetsika, adiresy WME.